DEG DEG-Puntland oo ku dhawaaqday in kiiskii Caasha Ilyaas ee berri loo balamay dib loo dhigay kadib markii xukuumadda Denni ku dhawaaqday in..
Puntlandnews.net (Garoowe)-Maxkamadda rafcaanka ee gobolka Nugaal ayaa waxa ay markale maalmo dib u dhigtay kiiskii marxuumad Caasha Ilyaas Aadan oo muddooyinkii ugu dambeeyey Garoowe ka socdey. Maxkamdda ayaa kiiskaan oo gabagabadiisa loo balansanaa maalinimada Arbacada […]
DAAWO-Madaxweynaha Puntland oo lakulmay safiirka Norway ee Somalia kuna dhawaaqay..
Madaxweynaha Dowladda Puntland Mudane Siciid Cabdulaahi Deni ayaa qasriga Madaxtooyada Garoowe ku qaabilay Safiirka dalka Noorwey ee Soomaaliya Ms Elin Bergithe Rognlie iyo wafdi la socda oo Puntland soo gaadhay. Madaxweynaha Dowladda Puntland iyo weftiga […]
DAAWO-Madaxweynaha Somaliland oo ku dhawaaqay war ku aadan xaaladda gobolka Sanaag kana laabtay go’aankii xayiraadda.
Puntlanndews.net (Garoowe)-Madaxweynaha maamulka Somaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa wareegto ka soo baxday xafiiskiisa waxa uu ku sheegay inuu kaga laabtay go’aankii uu xaaladda deg degga ah ugu soo rogey gobolka Sanaag. Markaan Arkay: In lagu […]
DAAWO-Ra’iisul Wasaare Khayre,”Waxaan doonaynaa Galmudug midaysan oo Muqdisho laga maamulo”.
Ra’iisul Wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya (XFS), mudane Xasan Cali Khayre oo meel fagaara ah kula hadlay bulshada Dhuusamareeb ayaa sheegay in uu magaalada u yimid in reer Gal-mudug uu kala shaqeeyo dhismaha Dowlad gobaleed loo […]
WAR DEG DEG AH-Gaadiid ay leeyihiin ciidanka Puntland oo qarax lala beegsaday.
Puntlanndews.net (Boosaaso)-War deg deg ah oo hadda naga soo gaarey buuraleeyda Cal-madaw ayaa sheegaya in ciidamo katirsan kuwa difaaca Puntland lala beegsaday qarax sababay khasaare kooban. Wararkii ugu dambeeyey ee aanu ka helayno buuraleeyda Galgala […]
Sheekh Shaakir,”Galmudug Hadda Kadib Waxaa Ka Socon Doona Amarka Khayre & Farmaajo”.
Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan oo ah Madaxa Xukuumadda Maamulka Galmudug oo xilkaas loo Magacaabay kadib heshiiskii Jabuuti ayaa sheegay in ay soo dhaweynayaan wadashaqeynta u bilaawday dowladda Federaalka iyo Maamulka Galmudug. Isaga oo ka […]
DAAWO-Madaxweyne ku-xigeenka Puntland oo Garoowe kaga dhawaaqay…
Puntlanndews.net (Garoowe)-Madaxweyne ku-xigeenka dowladdda Puntland Axmed Cilmi Cismaan Karaash ayaa maanta magaalada Garoowe waxa uu ka furay shir muhiim u ah Puntland isagoona war culus kaga dhawaaqay. DAAWO
Donald Trump oo warqad lama filaan ah u soo diray madaxweynaha dowladda..
Hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un ayaa warqad “cajiib ah” ka helay madaxweynaha Maraykanka Donald Trump. Kim Jong-un ayaa amaanay warqadda waxaana uu sheegay in uu “si weyn uga fikirayo waxyaabaha xiisaha leh”, sida ay sheegtay […]
BREAKING NEWS-Yuusuf Dabageed oo lagu amray inuu ka guuro xarunta gobolka Hiiran & ciidanka Itoobiya oo ku hareeraysan.
Puntlandnews.net (Nairobi)-Gudoomiyihii hore ee maamulka gobolka Hiiraan Yuusuf Axmed Hagar Dabageed ayaa waxaa amar lagu siiyey inuu muddo 72 saac gudohood ah isaga guuro xarrunta maamulka gobolka ee uu ka degan yahay Beledweyne. Kadib kulan […]
Wararkii ugu dambeeyey ee Galmudug iyo madaxweyne Xaaf oo la wareegey Cadaado.
Magalada Cadaado ee gobolka Galgaduud ayaa waxaa lagu wadaa in Maanta oo Talaado ah inay gaaraan Wafdi isugu jira xildhibaano iyo Wasiiro ka tirsan Dowladda Federaalka, iyada oo diyaar garoow haatan uu ka socdo Magalada […]
WAR DEG DEG AH-Xubno ka socda beesha caalamka oo Garoowe ku wajahan lana kulmaya madaxweyne Denni & u jeedka wafuuda.
Puntlanndews.net (Garoowe)-Magaalada Garoowe ee caasimadda Puntland ayaa maanta waxaa ku wajahan xubno ka socda beesha caalamka fadhigooduna yahay magaalada Nairobi ee xarunta dalka Kenya. Xubnahaan ayaa waxaa kamid ah safiirka dalka Norway ee Soomaaliya Ambassador […]
DAAWO-Wasiirka amniga Puntland oo barlamaanka hortegey iyo doodii ugu cuslayd oo dhexmartay & go’aan la gaarey.
Gollaha wakiiladda Dowladda Puntland ayaa su’aalo la xiriira Amniga Puntland iyo wadashaqaynta uu la leeyahay guddiga Amniga ee gollaha waydiiyay Wasiirka Amniga Puntland Cabdisamad Maxamed Gallan. Barlamaanka ayaa wasiir Cabdisamad Maxamed Gallan waydiiyey su’aalo xasaasi […]
DHEGAYSO-Masuul sheegay inuu ka badbaadey isku-day dil oo madaxtooyadu soo abaabushey.
Guddoomiyihii Maamulka gobolka Hiiraan ee uu dhawaan xilka ka qaaday Madaxweyne Waare xilkaasi diiday Yuusuf Axmed Hagar (Dabageed) ayaa sheegay in markii saddexaad uu ka badbaaday dil qorsheysan. Shir Jaraa’id uu ku qabtay Baladweynhe ayuu […]
Muqdisho & Hargaysa oo berri shir uga furmayo Nairobi & Somaliland oo rajo ka muujisay inay go’do.
Puntlandnews.net (Laascaanood)-Maamulka Somaliland ayaa markii ugu horaysay waxa uu ka hadlay shir berri Muqdisho iyo Hargaysa uga furmi doona magaalada Nairobi ee xarunta dalka Kenya. Baashe oo ah xubin ku sugan kenya kana mid ah […]
DAAWO-Sidee Khayre Loogu Soo Dhoweeyey Dhuusamareeb Muxuuse Kala Kulmay.
Wafdi uu hogaaminayo Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre ayaa goor dhow gaaray magaalada Dhuusamareeb ee xarunta Dowlad Goboleedka Galmudug. Ra’iisul Wasaare Kheyre iyo wafdigiisa ayaa waxaa si weyn ugu soo dhoweeyay […]
DAAWASHO XASAASI AH: Xaaf ma eeday Daawadii uu Farmaajo ka diiday?
Madaxweynaha Somaliland oo masuuliyiin cayriyey kuwa kalena xilal u dhiibey & gobolo…